Most of the 10 Questions from clients
Mobile Developer တွေအတွက် လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ မေးခွန်း (၁၀)
ဒီ Article မှာရေးမဲ့အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့လို့ Mobile Developer တွေကို လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့အတွက် App တွေရေးပေးဖို့ ငှားရမ်းတဲ့အခါကြရင် မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းအများစုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်လို Mobile ခေတ်မှာတော့ Mobile Device တွေကလူတွေရဲ့ ရှင်သန်ခြင်းဆိုတဲ့ ဘဝထဲမှာ အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သူတို့ရဲ့ Company တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြော်ငြာချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အရင်ကလို တီဗီကနေပဲ ကြော်ငြာကြတာ မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ လူတွေရဲ့ Mobile Device တွေထဲကိုပါ ကြော်ငြာလာကြပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့ Company တွေအတွက် ၊ ထုတ်ကုန်တွေအတွက် Mobile App တွေရေးဖို့ မိတ်ဆွေကို ငှားရမ်းတော့မယ်ဆိုရင် မေးတတ်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1. မိတ်ဆွေဖန်တီးထားတဲ့ Mobile App တွေကို နမူနာ အဖြစ်ဘယ် App တွေရှိသလဲ။ဘယ်နေရာမှာ ကြည့်လို့ရနိုင်မလဲ။
ဒီမေးခွန်းကိုအရင်ဆုံး စမေးတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလုပ်အပ်မဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ ဒီအချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Mobile App ကို အခုမှစရေးဖူးတဲ့ Mobile Developer ကိုဆိုရင် မအပ်ချင်ကြပါဘူး။ အတွေ့အကြုံရှိပြီး စွမ်းရည်ပြည့်ဝတဲ့ Mobile Developer မျိုးကိုသဘောကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အရင်က ရေးသားဖန်တီးဖူးတဲ့ Mobile App တွေကို သူတို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ ပြသနိုင်အောင် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
2. အရင်က မိတ်ဆွေရေးသား ဖန်တီးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ (သို့) လက်ရှိ ရေးသားပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခုခုရဲ့ Client Lists တွေကို သိခွင့်ရှိနိုင်မလား။
ဒီမေးခွန်းကတော့ အမေးများပါတယ်။ အရင်ကကိုယ်လုပ်ပေးဖူးခဲ့တဲ့ Company ၊ Team ၊ Organization တွေကိုမေးတာပါ။ ပြောလို့ရတဲ့ အချက်တွေကိုပြောပြီး ပြောလို့မရတဲ့ အချက်တွေရှိရင်တော့ ဒီအချက်ကတော့ ပြောလို့အဆင်မပြေပါဘူးဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ။ သူတို့က ကိုယ့်ကိုအလုပ်မအပ်ခင်စပ်ကြားမှာ အဲ့ဒီ Clients တွေကိုဆက်သွယ်တတ်ပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို စုံစမ်းတတ်ပါတယ်။ Past Clients တွေက မိတ်ဆွေရဲ့ အရည်အချင်းကို သဘောကျလို့ မိတ်ဆွေကို ထောက်ခံပြီဆိုရင်တော့ ကံကောင်းပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပေတော့။
3. မိတ်ဆွေ ဘာ Smart Phone အမျိုးအစားသုံးသလဲ။
ဒီမေးခွန်းကတော့ Mobile Developer ရဲ့ Passion ကိုစမ်းသပ်သောအားဖြင့် မေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ iPhone App ဖန်တီးရေးသားနေတဲ့ iOS Developer ကို iPhone ပဲကိုင်နေတာ မြင်ချင်ကြတာပါပဲ။ iOS Developer လုပ်ပြီး Android ဖုန်းကိုင်နေရင်တော့ အများအမြင်မှာ မတင့်တယ်ပဲနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Developer အနေနဲ့ ကိုယ် ဖန်တီးရေးသားနေတဲ့ Platform နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဖုန်းကိုပဲ ကိုင်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
4. မိတ်ဆွေရဲ့ App ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဒီမေးခွန်းကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေတိုင်း မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းမျိုးပါပဲ။သူတို့က ကိုယ့်ကို အလုပ်အပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရေးသားဖန်တီးပေးမဲ့ Mobile App ကသူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ဘယ်လောက်ထိ ၊ ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးပြုပေးနိုင်သလဲဆိုတာကို သူတို့အနေနဲ့ သိချင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဖန်တီးပေးမဲ့ App က လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ဘယ်လို ၊ ဘယ်ပုံ အကျိုးပြုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ အချက်ကျကျ ရှင်းလင်းပြောပြပေးသင့်ပါတယ်။
5. မိတ်ဆွေ App ကို ဖန်တီးနေတုန်းမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို မျက်ချည်မပြတ် သိအောင် ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။
ဒီအချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သူတို့လုပ်ငန်းအတွက် App ကို Development လုပ်နေတုန်းအချိန်အခါမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ App အခြေအနေတွေကို မျက်ချည်မပြတ်သိချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ် Develop လုပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ App ရဲ့ Design တွေက လှကောလှရဲ့လား ၊ App ကရိုးရှင်းပြီး သုံးလို့ကော အဆင်ပြေရဲ့လား ၊ ဘယ်လောက်ကြာဦးမှာလဲ ၊ ဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲ … စသဖြင့်ပေါ့ … သူတို့အနေနဲ့ သိချင်ကြတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ဘက်က Develop လုပ်နေတုန်းအခြေအနေမှာ သူတို့နဲ့ အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ နေရာတို့ ၊ ဖုန်းနံပါတ်တို့ ၊ Email တို့ကိုပေးထားပြီး ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
6. မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Special Features တွေဘာတွေ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်သလဲ။
ဒီမေးခွန်းကတော့ လူသားတွေရဲ့ ထုံးစံပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေဟာ Unique ဖြစ်ချင်ကြတဲ့လူတွေချည်းပါပဲ။ သူလုပ်လို့ ငါလိုက်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ သူနဲ့တော့ တူချင်တဲ့လူဆိုတာ အင်မတန်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့် အလုပ်အပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ App ထဲမှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် Features တွေကို Mobile Developer အနေနဲ့ ဘာတွေများ သီးခြား လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာ ကြိုတင် စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။
7. ဒီ Mobile App ကို ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်မှာလဲ။
ဒီမေးခွန်းက အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Mobile App ဖန်တီးသူနဲ့ အလုပ်အပ်သူ ကြားမှာ စာချုပ်တစ်ခု အနေနဲ့ပါ ချုပ်ဆိုထားသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအနေနဲ့ဆိုရင် Mobile App ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ ပါဝင်တဲ့ Source Code , App Design နဲ့ အခြားသော Developer ရဲ့အပိုင်းတွေကို ရေးသားဖန်တီးသူ Developer က ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ App Name , App ထဲမှာပါဝင်တဲ့ သူတို့ပေးထားတဲ့ Images , Trademark နဲ့ အခြားသော Company Contents တွေကိုတော့ အလုပ်အပ်သူသာ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကလည်း Mobile Developer နဲ့ အလုပ်အပ်သူတို့ကြားမှာ သေသေချာချာ ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
8. Mobile App ကိုဘယ်လို စမ်းသပ်ပေးမှာလဲ။
ဒီမေးခွန်းကတော့ ကိုယ်ရေးသားဖန်တီးနေတဲ့ Mobile App ပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူ့မှ မပြသေးခင် အလုပ်အပ်သူဟာ သူ့ရဲ့ Mobile Phone ထဲမှာ အရင်ဆုံး စမ်းသပ်ချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်အရင်ဆုံး အသုံးပြုတဲ့သဘောပါပဲ။ သူ့ Mobile Phone ထဲမှာ သူ့ စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားရပါမယ်။ ဒါမှသာ သူစမ်းသပ်ပြီးသူမကြိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေရှိရင် Mobile Developer ကိုပြန်ပြော ၊ Bug တွေတွေ့ရင် ပြန်ပြင်လို့ရအောင် ဖြစ်ပါတယ်။
9. ဒီ Mobile App ကို App Store ပေါ်ကို တင်ပေးမှာလား။
သူတို့အပ်ထားတဲ့ Mobile App ကို ရေးသားဖန်တီးပြီးစီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ သူတို့ကို မေးကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်မှာ Developer Program ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။ သူတို့အနေနဲ့ ဒီ App ကို App Store ပေါ်ကို တင်ချင်ရင်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အကောင့်နဲ့တင်ပေးရမလား ၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့အကောင့်နဲ့ပဲ အသစ်ဆောက်ပြီး တင်ပေးရမလား ၊ စသဖြင့်ပေါ့… သူတို့သဘောကိုမေးပြီးသာ ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါ။
10. Mobile App ဖန်တီးရေးသားခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်ခ ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
ဒီအချက်ကတော့ ကိုယ်ရေးသားဖန်တီးပေးမဲ့ Mobile App ရဲ့ အရွယ်အစား ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ Data တွေအများကြီးနဲ့ လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ စျေးပိုတောင်းရပါမယ်။ များသောအားဖြင့် Mobile App တစ်ခုကို US $1000 ကနေ US $5000 အထိရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အပ်တဲ့ ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ခကို ယူဆောင်သင့်ပါတယ်။
ဒီလအတွက်ကတော့ Mobile Developer တွေအတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တဲ့ ဆောင်းပါးလေး ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အပေါ်က မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချဲ့ထွင်ပြီး စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားလိုက်ရင်တော့ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။